नेकपा फुट्यो भनेर काँग्रेस उत्साहित हुनुपर्दैन ? | Hindu Khabar
नेकपा फुट्यो भनेर काँग्रेस उत्साहित हुनुपर्दैन ?
ग्राफिक्सः यादव घिमिरे ।
देशको नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी फुटसँगै नेपाली काँग्रेसमा उत्साह जागेको छ । तर काँग्रेसजनहरु नेकपा फुटे भनेर उत्साहित हुनुपर्दैन । किनकी कम्युनिष्टहरु केहि दिनमा हामीहरु गुट छुट्याउँनका लागी एकले अर्कालाई आरोप पत्यारोप गरेका हौँ, हामीहरु सधै एकजुट छौँ, भनेर केहि दिनपछि मिल्न पनि पछि पर्दैनन् होलान । किनकी नेपालमा सच्चा कम्युनिष्टहरु नेकपाभित्र छैनन् । सच्चा कम्युनिष्ट भएको देशले फड्को पक्कै मार्दथ्यो !
विगतमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानिय निर्वाचनमा काँग्रेससँग मिलेर निर्वाचनमा होमिए । पछि काँग्रेसबाट राम्रो नहुने देखिएपछि फेरी नेकपा एमालेसँग मिलेर पार्टी चुनावमा होमिए । जसका कारण नेकपाको दुईतिहाई आएको थियो ।
नेकपाभित्र आन्तरिक रुपमा विवाद बढ्दै जादाँ नेकपा ओली पक्ष र नेकपा प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्ष भनेर गुटबन्दी गर्दै आन्दोलनमा होमिएका छन् ।
काँग्रेसले पक्ष र विपक्ष लिएर खासै नबोलेतापनि उनीहरु एकले अर्कालाई आरोप पत्यारोप गर्दै सडकमा निस्कीएका छन । नेपाली काँग्रेसभित्र पनि नेकपाफुटसँगै दुई पक्षिय रुपमा सहयोग गर्ने धारणा व्यक्त भईरहेको छ ।
सभापति शेरबहादुर देउँवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सहयोग गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिरहनुभएको छ । भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई सहयोग गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिरहनुभएको छ । देउँवा र पौडेलका पनि आन्तिरक रुपमा केही स्वार्थ त पक्कै होलान ? कतै हल्ला छ, प्रचण्ड र माधव नेपाल टिमले वरिष्ठ नेता पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउँने आश्वासन दिएका छन, त्यसकारण पौडेल पक्षले नेकपाको उक्त पक्षलाई समर्थन गर्नुपर्ने आवाज उठाईरहेको छ ।
सभापति देउँवालाई पनि नेकपाका दुबै पक्षले प्रधानमन्त्रीको अफर दिईरहेका छन । दुबै पक्षले प्रधानमन्त्री दिदाँ देउवा भने तत्काल मौन छन । देउँवाले नेकपालाई भनेको एक शव्द ‘तपाईहरु फुटेर आधिकारीक प्रमाण निर्वाचन आयोगबाट ल्याउँनुस, अनि सहयोग गर्छु’ । यो अभिव्यक्ती प्रति काँग्रेसका नेताहरु भने देउँवाको धारणा राम्रो आएको बताउँछन । पार्टी फुटेको प्रमाणसँगै सरकारमा जाने, नजाने बल्ल निर्णय गर्नुपर्ने काँग्रेसले सरकारविरुद्ध गरेका आन्दोलनमा सहभागी वक्ताहरुले बोल्ने गरेका थिए ।
नेकपा ओली र पचण्ड पक्षबिचँ आरोप पत्यारोप सँगै बाग्मती प्रदेश र प्रदेश नं. १ मा सरकारविरुद्ध प्रचण्ड पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको छ । अविश्वासको प्रस्ताव फेल गराउँने र पास गराउँने दुबैमा काँग्रेस मुख्य निर्णायकमा रहन्छ । काँग्रेसले बाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्री जुन पक्षले दिन्छ, उक्त पक्षलाई समर्थन गर्ने खालको तयारी गरेको बुझिन्छ । तर काँग्रेसको आधिकारीक धारणा भने आएको छैन ।
नेपाली काँग्रेसले अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर गैरसंवैधानिक काम भएको आन्दोलनका क्रममा बताएको छ । आन्दोलनमा बताउँदै गर्दा संसद पुनःस्थापना नभए निर्वाचनका लागी तयारी भएको अभिव्यक्ती पनि सार्वजनिक भएको छ ।
कतै आन्दोलनका नाममा काँग्रेसको निर्वाचन प्रचारप्रसारको अभियान त होईन ? काँग्रेसले पुस २५ गते प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा, माघ ३ गते नगर/गाउँ पालिकाको मुकाममा र माघ ८ गते वडा वडामा विरोध सभा सम्पन्न गरेको छ । विरोध सभामा लामो समयदेखि कुनै कार्यक्रम नभएका कारण उत्साहपुर्वक उपस्थिती रहेको पाईन्थ्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते संसद विघटन नगरेको भए यि आन्दोलनका कार्यक्रम पक्कै हुनेथिएनन ।
लामो समयदेखी काँग्रेसको नेतृत्वतह जनतामाझ नपुगेकोमा अहिलेका आन्दोलनमा अधिकांश नेताहरु गाउँगाउँमा पुगेका थिए । गाउँगाउँमा काँग्रेसका चुनावी नाराका गितको तरङ्ग, अर्कोतिर सरकारको विरोधले साच्चै निर्वाचनको झ–झल्को दिएको थियो ।
देशको सबैभन्दा जिम्मेवार पार्टी रहेको भन्दै काँग्रेसले अभिव्यक्ती दिने गर्दछ । तर जिम्मेवार पार्टी हुनका लागी सबै जनताले खोजेका कुराहरु पुरा गर्न सकेका छौँ, कि छैनौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी जस्तै काँग्रेसमा पनि गुट निमार्ण नभएको होईन । संस्थापन पक्ष ६० प्रतिशत र विपक्ष ४० प्रतिशत भागवण्डा काँग्रेसको गुटबन्दीको भागवण्डा हो ।
कम्युनिष्टलाई सच्चीन भन्दै गर्दा काँग्रेस सच्चिने कहिले हो । भातृसंगठन नेविसंघ, तरुणदलले कहिले पुर्णता पाउँने हो ? काँग्रेसको निर्वाचन कहिले हुने हो ? किन काँग्रेसले भातृ संगठनहरुको निर्वाचन समयमा गर्न सक्दैन, केन्द्रीय कार्यसमितीका कारण ? केन्द्रीय कार्यसमिती मात्र नभएर यसको दोष सबैले लिन पर्दछ । नेकपा फुट्यो भनेर खुसी हुन भन्दा काँग्रेसका अस्तव्यस्त रहेका संगठनको निर्वाचन गर्ने, सबै सुध्रिएर अगाडी बढने कि ।